တထာဝိဓံ - သို့ကလို ဂုဏ်အင် စုံလင်ပေသည့် ပညာရှိအပေါင်း သူတော်ကောင်းကို၊ သပ္ပုရိသံ - ဘ၀နောက်နှောင်း ကောင်းထက်ကောင်းဖို့ လမ်းကြောင်းတီထွင် သူတော်စင်ဟူ၍၊
မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်းရှိ ရွာလေးတရွာတွင် ရေထမ်းသမား ဘိန်းစားတဦးကို တွေ့ဖူးသည်။ တနေကုန် ရေထမ်းထား၍ ကိုယ်လက်နာကျင် ပင်ပန်းလာလျှင် ဘိန်းစားသည်။ ဘိန်း မစားရပြန်လျှင်လည်း ရေထမ်းရန် ခွန်အား မရှိဟု ဆိုသည်။ ဒီလိုနှင့် လုံးချာလည်ရင်း ဘိန်းစား ဖြစ်နေသည်။ သူ ရေထမ်းစရာ မလိုတော့လျှင် ဘိန်းစားဘ၀မှ လွတ်ပြီဟုကား မဆိုနိုင်။ သို့သော် ပို၍ ပြင်းသော မူးယစ်ဆေးများ စွဲ မသွားခြင်းကိုပင် ဘေးလူများက ဖြေစရာ တခုအဖြစ် မြင်ပေးကြရသည်။ ဘာသာတရားအား ဘိန်းနှင့် တင်စားသော မာ့က်စ်၏ စကားကို ဖတ်ရင်း ရေထမ်းသမား ဘိန်စားကို ပြန်သတိရသည်။ “လူတို့၏ ဘ၀အခြေအနေမှန်အား ဖုံးကွယ်ထားသည့် အတုအယောင် ဖြေသိမ့်မှုတို့ကို စွန့်လွှတ်ရန် တောင်းဆို တရားချခြင်းသည် ထိုအတုအယောင် ဖြေသိမ့်မှုတို့ လိုအပ်နေကြရသည့် သူတို့၏ ဘ၀အခြေအနေများကို စွန့်လွှတ်ရန် တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာတရားကို ဆန်းစစ်ဝေဖန်ခြင်းသည် စင်စစ်အားဖြင့် ထိုဘာသာတရားဟူသော ရောင်ဝါအောက်မှ လူသားတို့၏ ဘ၀အမော ဒုက္ခတောအား ဆန်းစစ်ဝေဖန်ခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်” ဟု မာက့်စ်က ဆက်ပြောသည်။ ဘာသာရေးဟူသည် အဖိနှိပ်ခံ လူတန်းစားတို့ကို ခေါင်းပုံဖြတ်ရာတွင် အသုံးချသည့် ဘူဇွာတို့၏ လက်နက်ကိရိယာဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ကာ၊ မာ့က်စ်ဝါဒီတို့က ဘာသာရေးကို ဖိနှိပ်ချေမှုန်းလေသည်။ ဘိန်းဖြတ်ရန် ဆေးခါးကြီးတိုက်ခြင်းဟု ယူဆကောင်း ယူဆပေလိမ့်မည်။ ဆေးထက် ဘေးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသူကလည်း ဆိုပါလိမ့်မည်။ စင်စစ် လောကတွင် ဘိန်းထက်ဆိုးသည့် ဘာသာတရားများ၊ အတွေးအခေါ် အယူဝါဒများလည်း ရှိနေသေး၏။ မေတ္တာတရား၊ ကရုဏာတရားတို့ ကင်းမဲ့၍ မှန်ကန်သည့် ကိုယ်ကျင့် သီလကိုလည်း လမ်းညွှန်မပေးနိုင်သည့် ဘာသာ၊ အယူဝါဒများသည် သုံးစွဲသူကို အကျိုးယုတ်စေရုံမက၊ ပတ်ဝန်းကျင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း အကျည်းတန်စေသည့် အဆိပ်နှင့် တူ၏။ ထိုဘာသာ၊ အယူဝါဒများနှင့် နှိုင်းစာလျှင် ဘိန်းနှင့် တူသော ဘာသာတရားများက တော်ပေဦးမည်။ ဘ၀အမောကို တခဏတာဖြစ်စေ ပြေပျောက်စေပါလိမ့်မည်။ အနာဂတ်ကို ရင်ဆိုင်ရန်အတွက် အတော်အသင့်သော ခွန်အားကိုလည်း ပေးပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ထိုဖြေသိမ့်မှုတို့သည် အတုအယောင်သာဖြစ်နေ၍ သက်သာရာ အစစ်ကိုကား ရနိုင်ကြမည် မဟုတ်။ ရောဂါ၏ အရင်းအမြစ်ကို ကုစားခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ ရောဂါ နှိပ်စက်မှု၏ ဒဏ်ကို သက်သာ၊ မိန်းမော၊ မေ့ပျောက်စေရုံမျှသာ စွမ်းနိုင်၏။ အဆိပ်နှင့်တူသော ဘာသာတရား၊ ဘိန်းနှင့်တူသော ဘာသာတရားတို့အပြင်၊ ရောဂါ၏ အကြောင်းရင်း ဇစ်မြစ်ကို ကုစား ပယ်သတ်ပေးနိုင်သည့် ဆေးနှင့်တူသော ဘာသာတရားလည်း ရှိပါသေး၏။ သို့သော် ဆေးကောင်း တလက်ကိုပင် အဆိပ် အဖြစ် အသုံးချနိုင်သလို၊ မူးယစ်ဆေး အဖြစ် အသုံးပြုကောင်း ပြုနိုင်ပါသေးသည်။ ထိုကြောင့် (ဆေးနှင့်တူသော ဘာသာတရားပင်ဖြစ်စေကာမူ) မိမိတို့၏ လက်ခံကျင့်သုံးမှု မှန် မမှန်ကိုလည်း သတိတရားဖြင့် စစ်ကြော ဝေဖန်နေရပါမည်။ စာညွှန်း။
ရှုမောဖွယ်ရာ ပန်းမာလာတို့ဖြင့် အလှဆင်ထားသော လုမ္ဗိနီသည် လုလင်ပျိုတို့ စိတ်လှုပ်ရှားလောက်အောင် အဆင်တန်ဆာ ပန်းမာလာတို့ဖြင့် အလှဆင်ထားသည့်
အင်ကြင်းပန်း ဟိမ၀န္တာ တောင်ခြေနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ပေါက်တဲ့ အင်ကြင်းပင်ကတော့ အင်ပင်၊ သစ်ရာပင်တို့လို သစ်မာအမျိုးအစားမှာ ပါဝင်ပြီး အမြင့်ပေ ၆၀၊ လုံးပတ် ၅-ပေ ၆-ပေလောက် အထိ ရှိတတ်ပါတယ်။ ပန်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင် ငှက်အတောင်လို အ၀ါရောင် အပွင့်တွေနဲ့ တစ်တောလုံး သင်းကြိုင်နေအောင် ပွင့်လေ့ရှိတယ်လို့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မဟာဂေါသိင်္ဂသုတ်မှာ ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေတဲ့ အင်ကြင်းပန်းတွေရဲ့ ရနံ့ကို နတ်ပန်းရနံ့နဲ့ တင်စားထားပါတယ်။ ဖြောင့်စင်းတဲ့ ပင်စည်၊ စိမ်းညိုရောင် အရွက်ရှိပြီး၊ အကိုင်းအခက်တွေက အထက်မိုးတိမ်မှာ အချင်းချင်း ရောယှက်နေကြတယ်လို့ အင်ကြင်းပင်ရဲ့ပုံစံကို သောဏကဇာတ် (ဇာတကအမှတ် ၅၂၉) ဂါထာမှာ ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။ အင်ကြင်ပင်ကြီးတွေကို တောစိုးသစ်ပင် (၀နပ္ပတိ) လို့လည်း ပါဠိစာတွေမှာ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ ခေတ်သစ် လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်
ယခုခေတ် လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်မှာတော့ တောစိုးသစ်ပင်လို့ ခေါ်ရလောက်တဲ့ အင်ကြင်းပင်ကြီးတွေ မရှိတော့ပါဘူး။ နောက်မှ အသစ်ပြန်စိုက်ထားတဲ့ အင်ကြင်းပင်ပျိုတွေပဲ ရှိပါတယ်။ ယခုခေတ် လုမ္ဗိနီဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့(Lumbini Development Trust) က ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ဥယျာဉ်က တောင်မြောက် အလျား ၃-မိုင်၊ အရှေ့အနောက် ၁-မိုင် ကျယ်ပါတယ်။ တောင်ဖက်ဆုံးမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ အလောင်းလျာ ဖွားမြင်တော်မူရာ မြေမြတ်မဟာ နယ်မြေ၊ အလယ်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံတကာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ တည်ရှိရာ နယ်မြေ၊ မြောက်ဖက်ဆုံးမှာတော့ တည်းခိုခန်းတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေရှိတဲ့ လုမ္ဗိနီ ရွာသစ်ဆိုပြီး နယ်မြေ သုံးခုခွဲထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ နယ်မြေမှာ တောင်မြောက် တူးမြောင်းဖောက်လုပ်ထားပြီး၊ အရှေ့ဖက်ခြမ်းမှာ ထေရ၀ါဒ နိုင်ငံတွေက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ တွေရှိပါတယ်။ အနောက်ဖက်ခြမ်းမှာတော့ မဟာယာနနဲ့ တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ချွင်းချက်အနေနဲ့ ပဏ္ဍိတာရာမ ရွှေတောင်ကုန်းရိပ်သာကတော့ အနောက်ဖက်ခြမ်းမှာ ရှိပါတယ်။ တူးမြောင်းရဲ့ တောင်ဖက်ထိပ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းလောင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မီးရှုးတိုင်တို့ ရှိပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး မီးရှုးတိုင်
စာကြွင်း။ ။ လုမ္ဗိနီ အနာဂတ်... သတင်းများအရ တရုတ်အစိုးရကို ကျောထောက် နောက်ခံပြုထားတဲ့ Asia Pacific Exchange and Cooperation Foundation (APECF) ဥက္ကဋ္ဌ Xiao Wunan နဲ့ နီပေါနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သလို နီပေါနိုင်ငံ လုမ္ဗိနီဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်းညွှန်ကော်မတီ (LDNDC) ဥက္ကဖြစ်တဲ့ Pushpa Kamal Dahal တို့က မက္ကာမြို့ကို နမူနာယူပြီး လုမ္ဗိနီကို ဘုရားဖူးနဲ့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားမြို့တော်ကြီး အဖြစ်ဖန်တီးဖို့ နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုး ထားပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၊ ကားလမ်း၊ ရထားလမ်းနဲ့ တည်းခိုခန်းတွေ၊ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စတာ တွေပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်အခြေစိုက် Vertical Theme Park (VTP) အုပ်စုနဲ့ ဖက်စပ်ပြီး Lumbini Cloud Tower နဲ့ Theme Park တွေလည်း တည်ဆောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းက ဒေါ်လာသန်း သုံးထောင်ကနေ ငါးထောင်အထိ ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီး ထက်ဝက်လောက်ကို (APECF) ကနေ မတည် ရင်းနှီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုအတွက် နိုင်ငံတကာက တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကနေ ဖိတ်ခေါ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးမြို့တော်” လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ ဒီစာချုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုမ္ဗိနီဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်းညွှန်ကော်မတီ အတွင်းမှာတောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးတာ မရှိခဲ့သလို၊ “… စာချုပ် ချုပ်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ အံအားသင့်သွားတယ်” လို့ ကော်မတီဝင် တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ဒါအပြင် ဒီစီမံကိန်းက ဘာသာရေးထက် စီးပွားရေး ဆန်လွန်းနေရုံသာမက၊ ဒီဒေသတ၀ိုက်ကို တရုတ်ရဲ့ နိုင်ငံရေး သြဇာချဲ့ထွင်မှုလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေနဲ့ တိဗက်လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ကြပါတယ်။ ထိုအတူပဲ ဒီစီမံကိန်းအကြောင်းကို ကြားသိရတဲ့ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလည်း လုမ္ဗိနီရဲ့ ဘာသာရေး အနှစ်သာရနဲ့ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေ ကွယ်ပျောက်သွားမှာ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂထံ အသနားခံစာ တင်မယ့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု လုပ်နေကြပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများက Dhamma Download ရဲ့ ဒီစာမျက်နှာမှာ သွားရောက် လေ့လာပြီး ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်ပါတယ်။
Chinese foundation plans $3 billion project in Nepal, The Hindu, Jul 17, 2011 Dahal, China panels sign Lumbini MoU, The Kathmandu Post, Nov 8, 2012
Petition to preserve the world heritage, Lumbini *****
ဒီနှစ် အတာ သင်္ကြန် အကြိုနေ့ဟာ ရုံးပိတ်၊ ကျောင်းပိတ် စနေနေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့နေပါတယ်။
ပွဲတော်နဲ့ အလှမ်းဝေးရာမှာ ရောက်ရှိနေရသူများအဖို့မှာတော့ Online ကနေသာ ပွဲတော်၌ စီးပျော်ရပါတယ်။ နေ့လည် ရောက်လာချိန်မှာတော့ Online ပေါ် ပလုံစီပြီးတက်လာတဲ့ မုန်လုံးရေပေါ်ပုံများကြောင့် “မေမေ မုန့်လုံးရေပေါ် စားမယ် လုပ်ပေးလို့” ဆိုလာပါတော့တယ်။
မုန့်သားမနပ်ခင်လေးမှာ သားတို့နဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ် ပတ်သက်ပုံအကြောင်းလေး ဖတ်ထားပါဦး။ အထဲမှာ ဌာပနာ တခုခုပါတဲ့ မုန့်လုံးကို လူသားတွေ ဘယ်အချိန်ကတည်းက စတင်စားသုံးကြသလဲတော့ မသိပါဘူး။ တရုတ်ပြည်ကြီးမှာတော့ ဆောင်းတွင်းလို အေးချမ်းတဲ့ရာသီမှာ မီးဖိုကြီးဖို၊ ရေနွေးအိုး အကြီးကြီးတည်၊ မိသားစုတွေ မီးဖိုကြီးနား ပတ်လည်ဝိုင်းပြီး ရေနွေးအိုးထဲ မုန့်လုံးတွေ ပစ်ပေါက်ထည့်လို့ ပူပူနွေးနွေး စားသောက်ကြတဲ့ ဓလေ့ရှိတယ်လို့ ဖတ်မှတ်ဖူးပါတယ်။ စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အားကြောင့်ပဲလား၊ မုန့်လုံးရဲ့ အရသာ ကြောင့်ပဲလား၊ သူတို့ အမေက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်မကျွေးတတ်ပေမဲ့ သားနှစ်ယောက်ကတော့ ရေပေါ်သောမုန့်လုံးကို အလွန်ကြိုက်ကြပါတယ်။ ဒီမှာ ရနိုင်တဲ့ Tang Yuan (မုန့်လုံးရေပေါ် Chinese Version) ondeh ondeh (မုန့်လုံးရေပေါ် Malay Version) တို့ကို မြိန်ရည်ယှက်ရည် စားလေ့ရှိပါတယ်။ မုန့်သား နပ်လောက်ချိန်၊ စိတ်ထားပြီးသား ထန်းလျက်တွေကို ပဲဆီလေးဆမ်း… လုံးတော့မယ်ဆိုတော့ မုန့်နှစ်တွေက လုံးမရအောင် ပျော့ဖတ်နေပါတော့တယ်။ ဒီတော့ ဆန်မှုန့်တွေ ထပ်ထည့်ပြီး လုံးပလိုက်ပါတယ်။ ရေနွေးအိုးကြီးထဲ ပစ်ပစ်ထည့်။ အဲ…မုန့်လုံးတွေက ပေါ်ချိန်တန်လို့လည်း ပေါ်မလာကြဘူးတော့…။ ပစ်ထည့်တဲ့ အရှိန်များပြီး အိုးဖင်ကပ်နေကြသလားဆိုပြီး ယောင်းမနဲ့ ထိုးမွှေ… မလုံတလုံ မုန့်လုံးတွေ ပေါက်ထွက်ကုန်မှာလည်း စိုးရိမ်ရသေး…။ အဲ့သလို ဓာတ်ကြမ်းတွေ တိုက်လိုက်တော့ မုန့်လုံးလေးတွေက မတက်ချင်တက်ချင်နဲ့ ဟိုတလုံး ဒီတလုံးတက်လာသား…။ ရေအေးထဲစိမ် အအေးခံတုန်းရှိသေး…သားကြီးက “ဘယ်လိုနေလဲ စားကြည့်မယ်” ဆို… တလုံးကောက်ဝါး…။ “ဟင်..မေမေ့ဟာတွေက အထဲက မကျက်သေးဘူး… သေချာ မတက်သေးပဲနဲ့ မေမေက ဆယ်တာကိုး” ဆိုပြီး… အညူဆူကလည်း ခံရသေး။ ဒါဆို “ပြန်ထည့် ပြန်ထည့် ရေနွေးအိုးထဲ ပြန်ထည့်…” သူတို့ဟာ သူတို့ ပေါ်ချင်တဲ့ အချိန်ကြမှသာ ပေါ်ကြတော့ အေ… ဆိုပြီး… မုန့်လုံးရေပေါ် တပန်းကန် ရလိုက်လေသတည်းပေါ့။ အပေါ်က ဖြူးစားစရာ အုန်းသီးမှုန့်ကို သားကြီး သွားဝယ်တာ မရခဲ့လို့၊ မအေကိုယ်တိုင် တခေါက်သွားဝယ်ရသေးတယ်။ အတာကူးတဲ့ တန်ခူးလ သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာ ဘာကိုမှန်းမသိ ကြိုလိုက်တဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ် မာတောက်တောက်ကို သားနှစ်ယောက် မစားချင် စားချင် စားနေတာကို မကြည့်ရက်လေလို့… အခန်းထဲ ၀င်နေလိုက်ပါတယ်။ နောက်တနေ့ မှာတော့ Bengawan Solo က ondeh ondeh ကို ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ရန်တဗူး၊ သားနှစ်ယောက်အတွက် တဗူးစီ စုစုပါင်း သုံးဗူးကို စင်္ကာပူဒေါ်လာငွေ ရှစ်ဒေါ်လာကျော် အကုန်အကျခံ၍ ၀ယ်လာပါတယ်။ တဗူးသာ ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်လိုက်ရပြီး၊ သားနှစ်ယောက်မှာမူ သူတို့အလွန် နှစ်သက်ဖူးသော Malay Version မုန့်လုံးရေပေါ်ကို အဖက်မလုပ်ကြတော့ပါ။ ဆွမ်းတော်စွန့်ထားသည့် ပန်းကန်ထဲမှ တလုံးယူစားရင်း သားကြီးက “သူတို့က ဘယ်လို လုပ်ထားတာလဲ မသိဘူးနော်… မုန့်သားလေးက ပါးပါးလေးနဲ့ အထဲက အချိုတွေက အရည်ပျော်ပြီး အပြင်ကိုလည်း ပေါက်မထွက်ဘူးလို့”…ရိုးရိုးလေး သူမြင်တာ ပြောနေသည်ကို… ဖအေလုပ်သူက “သူတို့က သေသေချာချာ အချိုးအစားနဲ့ လုပ်တာ…ဒါကြောင့် ဘယ်တော့မဆို တသမတ်ထဲ ဖြစ်နေတာ… မြန်မာတွေက ထင်သလိုလုပ်တာ…တခါလာ တမျိုးနဲ့ အချိုးအစားမရှိဘူး… စနစ်တကျ မရှိဘူး” ဟူ၍ အမျိုးသားထုကြီး တခုလုံး လိုက်နာရန် မှတ်ချက်များ တသီတတန်းကြီး ပေးနေလေတော့သည်။
ဒီတော့ ရင်ထဲကကြိတ်ပြီး… သင်္ကြန်မိုး ရုပ်ရှင်ကားထဲက “ကလေးတွေကို ပေးပျော်လိုက်ပါ ကိုငြိမ်းမောင်…” လို့ လာပြောလေတဲ့ မမထားလို ငါ့မှာ မဏ္ဍပ်ဆောက်ပေးဖို့ မပြောနဲ့ ရေပေါ်တဲ့ မုန့်လုံးလေးတောင် စားကောင်းအောင် လုပ်မကျွေးနိုင်တဲ့ ဘ၀ ပါလားရယ်လို့…။
ကပိလ၀တ်မြို့နဲ့ သကျ (သာကိယ၊ သက္က) မျိုးနွယ်စုရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ဒီဃနိကာယ် အမ္ဗဋ္ဌသုတ်နဲ့ သုတ္တနိပါတ် သမ္မာပဗ္ဗဇနီယသုတ် အဖွင့် အဋ္ဌကထာတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကမ္ဘာဦးအစ မဟာသမ္မတမင်းက ဆင်းသက်လာတဲ့ ဥက္ကာကမင်းကြီးရဲ့ သားသမီးတွေကနေ သကျမျိုးနွယ်စုကို ထူထောင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဥက္ကာကမင်းကြီးဆိုတာက ရာမာယန၊ မဟာဘာရတစတဲ့ ရှေးဟောင်း ပူရဏ်ကျမ်းတွေမှာပါတဲ့ ဣက္ခာကု(Ikṣvāku) မင်းနဲ့ အတူတူပဲလို့ သိရပါတယ်။ ပူရဏ်ကျမ်းတွေအရ ဇမ္ဗုဒိတ်ကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့ အိန္ဒိယကို လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ မျိုးနွယ်စုကြီး နှစ်ခု ရှိခဲ့ပါတယ်။ လနတ်သားက ဆင်းသက်လာတဲ့ လမင်းမျိုးနွယ်နဲ့ နေနတ်သားက ဆင်းသက်လာတဲ့ နေမင်းမျိုးနွယ်တို့ပါ။ ဥက္ကာကမင်းက နေမင်းမျိုးနွယ်စုက ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာတွေမှာလည်း သကျမျိုးတွေကို နေမင်းမျိုးနွယ် (သူရိယ၀ံသ၊ အာဒိစ္စ၀ံသ) စသဖြင့် ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကတိက၀တ်အရ မိဖုရားငယ်တစ်ပါးက ဖွားမြင်တဲ့ သားကို ထီးနန်တင်ဖို့အတွက် ဥက္ကာကမင်းက သားတော်ကြီးတွေကို တိုင်းပြည်ကနေ နှင်ထုတ်ရပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ မိဖုရားအကြီးတွေက ဖွားမြင်တဲ့ သားတော် သမီးတော်တွေက တိုင်းပြည်ကနေခွာပြီး ဟိမ၀န္တာတောင်ခြေ အနီးက ကျွန်းတောအတွင်းက မြို့သစ်ထူထောင် နေကြပါတယ်။ ကပိလရသေ့ရဲ့ ကျောင်းသင်္ခမ်းရှိရာ အောင်မြေအရပ်မှာ မြို့တည်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကပိလ၀တ္ထု လို့အမည်တွင်ပါတယ်။ ဥက္ကာကမင်းရဲ့ သားတော်တွေက မျိုးနွယ်ဆက်မပျက်အောင် နှမတော်တွေနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီး မင်းဆက် ထူထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ကြားသိတဲ့ ခမည်းတော် ဥက္ကာကမင်းက “သကျာ ၀တ ဘော ကုမာရာ - အချင်းတို့ သားတော်တို့သည် စွမ်းနိုင်ကြပေ၏ (သကျာ)” လို့ ချီးမွန်းပါတယ်။ ဒါကို အကြောင်းပြုပြီး သကျမျိုး၊ သာကီဝင်မျိုးလို့ အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်။ (မဟာသာက၀န) ကျွန်းတောကြီးမှာ မြို့သစ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက် သာကိယလို့ အမည်တွင်တယ်လို့လည်း ဆိုကြပါသေးတယ်။ ကပိလ၀တ်မြို့နေရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှေးဟောင်း သုတေသနပညာရှင်တွေကြားမှာ ၀ိဝါဒကွဲနေပါတယ်။ အုပ်စုတစ်ခုက နီပေါနိုင်ငံဖက်ခြမ်းက တိလောရကွတ် (Tilaurakot) အရပ်လို့ ယူဆကြပြီး၊ အခြားအုပ်စုကတော့ လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်ရဲ့ အနောက်တောင်ဖက် ၉-မိုင်လောက်မှာရှိတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဖက်ခြမ်းက ပိပရဟ၀ါ (Piprahawa) အရပ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဗြိတိသျှသုတေသီ ကန်နင်ဟန်က တရုတ် ရဟန်းတော်တွေရဲ့ မှတ်တမ်းကို ခြေရာခံပြီး ကပိလ၀တ်ကို ရှာဖွေဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဂျာမာန်သုတေသီ ဒေါက်တာ အန်တွန် ဖျူးရာ (Anton Führer) က ၁၈၉၆-ခုနှစ်မှာ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား၊ ကောဏာဂုံနှင့် ကကုသန် မြတ်စွာဘုရား အလောင်းတော်တို့ ဖွားမြင်တော်မူ နေရာ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အသောကမင်းကြီး စိုက်ထူထားခဲ့တဲ့ ကျောက်စာတိုင်တွေကို ရုမ္မိန်ဒေး (Rummindei လုမ္ဗိနီ)၊ နိဂလိဟ၀ (Niglihawa)နဲ့ ဂေါတိဟ၀ (Gotihawa) စတဲ့ နေရာအသီးသီးမှာ ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အသောကကျောက်တိုင်တွေကို မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ တရုတ်ရဟန်းတော် ရွှန်ကျန်ရဲ့ မှတ်တမ်းကို မူတည်ပြီး တိလောရကွတ်အရပ်ကို အလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား ၂၉-နှစ်တာ နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရာ ကပိလ၀တ်မြို့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဒေသတ၀ိုက်ကို ထပ်မံ ရှာဖွေတူးဖော်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယသုတေသီ မူခါဂျီး (P.C. Mukhaji) က တိလောရကွတ်ဟာ ကပိလ၀တ်မြို့ဟောင်း ဖြစ်ကြောင်း ၁၈၉၉-ခုနှစ်မှာ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
၁၈၉၈-ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလိပ်မြေပိုင်ရှင် ၀ီလျံပက်ပ် (W.C. Peppé) က အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပိပရဟ၀ါ (Piprahawa) အရပ်မှာရှိတဲ့ စေတီဟောင်း တစ်ဆူကနေ အရိုးအိုးတွေပါတဲ့ ကျောက်သေတ္တာ တစ်လုံးကို တူးဖော်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ “… ဣယံ သလိလာနိဓနေ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂ၀တေ သာကိယာနံ” လို့ ဗြဟ္မီအက္ခရာနဲ့ ရေးထိုးထားတဲ့ ကမ္ပည်းကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအရိုးအိုးဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ သာကီဝင်မျိုးတွေရဲ့ အရိုးအိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအပြင် တရုတ်ရဟန်းတော် ဖာရှန်ရဲ့ မှတ်တမ်းမှာပါတဲ့ တည်နေရာနဲ့ ပိုပြီးနီးစပ်နေတဲ့အတွက် ပိပရဟ၀ါအရပ်က ကပိလ၀တ်နေရာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြလာကြပါတယ်။ သမိုင်းပညာရှင် ဗင်းဆင့်စမစ် (Vincient A. Smith) က တိလောရကွတ်က ရဟန်းတော် ရွှန်ကျန်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကပိလ၀တ် ဖြစ်ပြီး၊ ပိပရဟ၀ါက ရဟန်းတော် ဖာရှန် ရောက်ခဲ့တဲ့ ကပိလ၀တ်လို့ ၁၉၀၀-ခုနှစ်မှာ သူ့ရဲ့အယူအဆကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၂-ခုနှစ်ရောက်တော့ သီရိဝသ်တ၀ (KM Srivastava) က ပိပရဟ၀ါမှာ ထပ်ပြီး တူးဖော်တဲ့အခါ “ဥုံ ဒေ၀ပုတြ ၀ိဟာရေ ကပိလ၀တ္ထုဿ ဘိက္ခုသံဃဿ”လို့ ကုသျှန်အက္ခရာနဲ့ ရေးထိုးထားတဲ့ ကမ္ပည်းစာကို တွေ့ပြန်ပါတယ်။ ဒီတွေ့ရှိချက်ကြောင့် ပိပရဟ၀ါသာလျှင် ကပိလ၀တ္ထု မြို့ဟောင်း အစစ်လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား သုတေသ်ီတွေက အခိုင်အမာ ကောက်ချက် ဆွဲကြပါတယ်။ နီပေါနိုင်ငံသား သုတေသီတွေကလည်း အနီးဝန်းကျင်က အသောကကျောက်စာတိုင် သုံးခုနေရာနဲ့ ကြီးကျယ်တဲ့ မြို့ရိုးဟောင်းတွေကို ထောက်ပြီး တိလောရကွတ်သာလျှင် ကပိလ၀တ္ထုမြို့ဟောင်း အစစ်လို့ ငြင်းဆိုကြပါတယ်။ ပါဠိပညာရှင် ရီးစ် ဒေဗစ် (T.W. Rhys Davids) ရဲ့ အယူအဆကတော့ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ကပိလ၀တ်မြို့ဟောင်းက တိလောရကွတ်မှာရှိပြီး၊ ၀ိဋဋူဘမင်းက သာကီဝင်တွေကို သတ်ဖြတ် မြို့ကို ဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှ ပိပရဟ၀ါမှာ ကပိလ၀တ် မြို့သစ် ပြန်တည်ခဲ့တာ လို့ဆိုပါတယ်။ ၀ိဋဋူဘက သာကီဝင်တွေကို လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ဘဒ္ဒသာလဇာတ် (အမှတ် ၄၆၅) အဋ္ဌကထာနဲ့ ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သကျမျိုးနွယ် မြတ်စွာဘုရားကို အလွန်ကြည်ညိုတဲ့ ကောသလမင်းက မိမိနဲ့ လက်ဆက်ဖို့အတွက် ကပိလ၀တ်က သကျ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို တောင်းခဲ့ရာက ဇာတ်လမ်းစပါတယ်။ သက္ကတိုင်းက ကောသလမင်းရဲ့ သြဇာအာဏာ အရိပ်အောက်မှာ ရှိတဲ့ တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် ကောသလမင်းရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို မလွန်ဆန်ဝံ့ပါဘူး။ သာကီဝင်မင်းသမီးတွေကို အမျိုးဇာတ်မတူသူတွေနဲ့ လက်ဆက်မပေးလို့တဲ့အတွက် သာကီဝင် မဟာနာမ်မင်းနဲ့ ကျွန်မတစ်ဦးကနေ မွေးတဲ့ သမီး ၀သဘခတ္တိယာကို ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၀ိဋဋူဘက ပသေနဒီကောသလမင်းနဲ့ ၀သဘခတ္တိယာတို့က ရတဲ့သားပါ။ ၀ိဋဋူဘမင်းသား အရွယ်ရောက်တော့ မိမိရဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်တွေ ရှိတဲ့ ကပိလ၀တ်ကို သွားလည်ပါတယ်။ မိမိကို ကောင်းကောင်း ဧည့်ဝတ် မပြုကြရုံသာမက မိမိထိုင်သွားတဲ့နေရာကို “ကျွန်မရဲ့သား ထိုင်သွားတဲ့ နေရာ” ဆိုပြီး နို့ရည်တွေနဲ့ လောင်း ဆေးကြတယ်ဆိုတာကို သိသွားသွားတော့ ၀ိဋဋူဘက သာကီဝင်တွေ အပေါ်မှာ ရန်ငြိုးထားခဲ့ပါတယ်။ နောင်မှာ ၀ိဋဋူဘက ခမည်းတော် ပသေနဒီကို ထံက အာဏာသိမ်းပြီး နန်းတက်လာတဲ့အခါ ကပိလ၀တ်ကို စစ်ချီပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကလည်း ကပိလ၀တ်ကို သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ကြွပြီး ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကို ၀ိဋဋူဘရဲ့ ရန်ဘေးကနေ ကာကွယ်ပေးတော်မူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကို သိတဲ့အတွက် စတုတ္ထအကြိမ် သွားရောက် တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဗုဒ္ဓက ကပိလ၀တ်ကို မကြွတော့ပါဘူး။ ၀ိဋဋူဘက သကျမျိုးနွယ်တွေကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ပြီး ကပိလ၀တ်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ ကပိလ၀တ်မြို့ရဲ့ မြောက်ဖက် သဂါဟ၀ (Sagarhawa) အရပ်က Lambu Sagar ( ရေကန်ရှည် ) လို့ခေါ်တဲ့ ရေကန်ကို သကျမျိုးတွေကို လူမျိုးတုန်းသတ်ခဲ့တဲ့ နေရာလို့ ယူဆကြပါတယ်။ မဟာနာမ်မင်းကြီး ရေထဲကို ဆင်းပြီး မိမိကိုယ် မိမိ အဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ရေကန်ကလည်း ဒီရေကန်ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ View Kapilavastu and Lumbini inalarger map
ဒီစိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်အပျက်ရဲ့ ဝေးသောအကြောင်းအဖြစ် ကံကြမ္မာကို ရိုးမယ်ဖွဲ့ကောင်း ဖွဲ့နိုင်ပေမယ့်၊ နီးသောအကြောင်းအနေနဲ့ သကျတို့ရဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ လူမျိုးရေး မာန်မာနက သူတို့ လူမျိုး၊ သူတို့ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရင်လည်း မမှားနိုင်ပါဘူး။ သားသမင်တွေကို ကျားခြင်္သေ့တွေကတောင် ပြန်ပြီး ကြောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ ကပိလရသေ့ရဲ့ အောင်မြေလည်း ၀ိဋဋူဘ ရန်ကနေ အကာအကွယ် မပေးနိုင်တော့တာကို သတိပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သတ်ဖြတ်မှုကနေ လွတ်မြောက်သွားတဲ့ သကျမျိုးနွယ်တွေက ပိပ္ပလိဝန (ပိတ်ချင်းတော) ထဲမှာ မောရိယ (ဒေါင်း) အမည်နဲ့ မျိုးနွယ်စု အသစ် ထူထောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာရေးတဲ့ မဟာဝံသကျမ်းမှာ ဖော်ပြကြပါတယ်။ အချို့က အိန္ဒိယဖက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ ပိပရဟ၀ါ ဆိုတာ ပိပ္ပလိဝနကနေ အခေါ်ရွေ့လျောပြီး လာတာလို့ ယူဆကြပါသေးတယ်။ မောရိယမျိုးနွယ်စုက ဘိုးတော် စန္ဒဂုတ်မင်း လက်ထက် (340 BC – 298 BC) မှာ မောရိယမင်းဆက်ကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး မြေး အသောကမင်း လက်ထက် (304–232 BCE) မှာ မောရိယအင်ပါယာက အဲဒီခေတ်အခါရဲ့ကမ္ဘာမှာ အကြီးဆုံး အင်ပါယာနိုင်ငံကြီး ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အသောကမင်းရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာက ကမ္ဘာ အရပ်အရပ် ပြန်နှံ့ခဲ့ပေမယ့်၊ ယခုအချိန်မှာတော့ သာသနာစတင် မြစ်ဖျားခံရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ သာသနာ တိမ်ကော ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ အသောကမင်းကြီးရဲ့ရေးထိုးခဲ့တဲ့ ကျောက်စာတိုင်တွေ၊ တည်ထားခဲ့တဲ့ စေတီပျက်တွေကနေပဲ တချိန်က ထွန်းကားခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာကို ပြန်လည်မှန်းဆ ကြည်ညိုရပါတော့တယ်။ ဖြစ်ချည်တလှဲ့ ပျက်ချည်တခါ လောကဓမ္မတာကို သံဝေဂယူနိုင်ပါတယ်။ နိဂလိဟ၀ (ကောဏာဂုံဘုရား အလောင်းဖွားရာ)၊ ဂေါတိဟ၀ (ကကုသန်ဘုရား အလောင်းဖွားရာ)၊ သဂါဟ၀ (သာကီဝင်တွေကို လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ရေကန်)၊ ပိပရဟ၀ါ စတဲ့နေရာတွေကိုတော့ မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာဘုရားဖူး ၀န်ဆောင်အဖွဲ့တွေက ကပိလ၀တ္ထု (တိလောရကွတ်) ကိုပဲ ပို့ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ မြို့ရိုးဟောင်းက ၂၂-ပေကျယ်တဲ့ ကျုံး၊ ၁၀-ပေ ကျယ်တဲ့ မြို့ရိုးနဲ့ ၀န်းရံထားပါတယ်။ အရှေ့ဖက်နဲ့ အနောက်ဖက်က မြို့တံခါးကြီးတွေကို ရှေးဟောင်းသုတေသနက တူးဖော်ထားပါတယ်။ မြို့ရိုးဟောင်းတွေ၊ တံခါးမကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး တချိန်က ကပိလ၀တ်ဟာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့မယ် ဆိုတာမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ ကပိလ၀တ်ဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး လူနေ ထူထပ်ကြောင်း၊ လမ်းတွေမှာ ဆင်တွေ မြင်းတွေ လှည်းတွေ ရထားတွေနဲ့ ပြည့်ကျပ်စည်ကားကြောင်း မဟာဝဂ္ဂသံယုတ် မဟာနာမသုတ်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ တရုတ်ရဟန်းတော် ဖာရှန် ရောက်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာတော့ ကပိလ၀တ်မှာ အိမ်ခြေ ဆယ်စုလောက်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ကပိလ၀တ်ကနေ လုမ္ဗိနီကို သွားတဲ့လမ်းမှာလည်း လူသူကင်းဆိတ်နေပြီး ဆင်ဖြူတွေ၊ ခြင်္သေ့တွေရဲ့ ရန်ကြောင့် အထူးသတိထားပြီး သွားရတယ်လို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။
နန်းတော်ရာနေရာကနေ အရှေ့ဖက်ကို မီတာ-၂၀၀ လောက်ဆက်ပြီး သွားရင် အရှေ့ဖက် မြို့တံခါးကို ရောက်ပါတယ်။ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားက ဒီအရှေ့ဖက်တံခါးကနေ တောထွက်တော်မူခဲ့တာ ဖြစ်လို့ “မဟာဘိနိက္ခမနဒွါရ” လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ မြို့တံခါးကနေ အရှေ့ဖက်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်ရင် မလှမ်းမကမ်းမှာ စေတီပျက်ကုန်းလေး တစ်ခုကို တွေ့ရပါတယ်။ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေကတော့ ကဏ္ဍကမြင်း ရင်ကွဲနာကျပြီး နတ်ရွာလားတဲ့ နေရာအထိမ်းအမှတ် လွမ်းစေတီလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမ်းစာတွေ အရဆိုရင်တော့ ကဏ္ဍကမြင်း ရင်ကွဲနာကျတဲ့နေရာဟာ အနောမာမြစ်ကမ်း နံဘေးမှာ ရှိရမှာ ဖြစ်လို့ ဟုတ်ဟန် မတူပါဘူး။ အလောင်းတော်မင်းသား တောထွက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး မြို့တံခါးက ထွက်တဲ့အခါ ကပိလ၀တ်ကို ပြန်ပြီး ကြည့်လိုတဲ့ စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ဖြစ်တာနဲ့ မဟာပထ၀ီမြေကြီးက အိုးထိန်းစက်လို လည်ပြီး မြို့တော်ကို ပြတယ်၊ နောင် ဒီနေရာမှာ ကဏ္ဍကအနိဝတ္တနစေတီ တည်ခဲ့ကြကြောင်း ဗုဒ္ဓ၀င်အဋ္ဌကထာမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အခုလှမ်းမြင်နေရတဲ့ ကုန်းမို့မို့လေးက ဒီစေတီ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကပိလ၀တ်ရဲ့ အရှေ့ဖက်တကျောက လယ်ကွင်းတွေမှာ ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒနမင်း လယ်ထွန်မင်္ဂလာ ကျင်းပခဲ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ အလောင်းတော် မင်းသားလေးဟာ ခမည်းတော်ကို စောင့်ဆိုင်းရင်း မိမိရဲ့ ၀င်သက်ထွက်ကို အာရုံပြုနေတဲ့အခါ ပထမဈာန်အဆင့်ရှိတဲ့ သမာဓိကို ရတော်မူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သပြေပင်ရိပ်နေရာသည်လည်း ဒီလယ်ကွင်းပြင်တွေရဲ့ အလယ်တနေရာရာမှာ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မှန်းဆ ကြည့်ရပါတယ်။ သပြေပင်ရင်းမှာ ကလေးဘ၀က ရခဲ့ဖူးတဲ့ အာနာပါန ဈာန်သမာဓိဟာ နောင် မဟာဗောဓိပင်ရင်းမှာ ရရှိမယ့် သမ္မာသမ္ဗောဓိ ဉာဏ်တော်အတွက် အလွန် ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားမိခဲ့ပါတယ်။ ကပိလ၀တ္ထု (@ Tilaurakot)
သားတော် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်ပြီလို့ သတင်းကြားတဲ့အခါ သုဒ္ဓေါဒနမင်းက အမတ်တွေကို စေလွှတ်ပြီး ရာဇဂြိုဟ်မြို့ ဝေဠုဝန်ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ မြတ်စွာဘုရားကို ပင့်ဖိတ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားပင့်ဖို့ ရောက်လာတဲ့ အမတ်တွေက တရားတော်ကို နာကြားရပြီးတဲ့နောက် ရဟန်းပြုသွားကြပြီး သုဒ္ဓေါဒနမင်းရဲ့ အမှာစကားကို လစ်လျူရှုထားကြပါတယ်။ အကြိမ်ကြိမ် စေလွှတ်ပေမယ့် မရတဲ့အဆုံး ဗုဒ္ဓနဲ့ ဖွားဖက်တော်ဖြစ်တဲ့ ကာဠုဒါရီအမတ်ကို စေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ကာဠုဒါရီအမတ်လည်း ရဟန်းပြုသွားပေမယ့် သုဒ္ဓေါဒနမင်းရဲ့ အမှာစကားကို မမေ့လျော့ပဲ နွေဦးရာသီရဲ့ သာယာလှပပုံတွေကို ဖော်ကြူးပြီး မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ ကပိလ၀တ်ပြည်ကို ကြွတော်မူဖို့ ဂါထာတော် ခြောက်ဆယ် (အတိအကျအားဖြင့် ၆၄-ဂါထာ) နဲ့ ပင့်လျှောက်တော်မူပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ရဟန်းသံဃာတော်တွေ ခြံရံပြီး တစ်နေ့ တစ်ယူဇနာခရီးနဲ့ နှစ်လကြာ ရာဇဂြိုဟ်ကနေ ကပိလ၀တ္ထုကို ဒေသစာရီကြွ ချီခဲ့ပါတယ်။ ကပိလ၀တ်ကို ရောက်တဲ့အခါ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့ ရဟန်းတော်တွေ သီတင်းသုံးဖို့အတွက် နိဂြောဓ အမည်ရတဲ့ သာကီဝင်မင်းသားရဲ့ ဥယျာဉ်အရံကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ သာကီဝင်မင်းတွေက အလွန် မာန်မာနကြီးသူတွေ ဖြစ်တဲ့အလျောက် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာထက် အသက်ရွယ် ငယ်ရွယ်သူတွေကသာ လက်အုပ်ချီမိုးပြီး ရှိခိုးကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာထက် အသက်အရွယ် ကြီးသူ သာကီဝင်မင်းများကတော့ ရှိခိုးခြင်း မပြုဘဲ နောက်ကနေသာ ခရီးဦး ကြိုဆိုကြပါတယ်။ မာန်မာနထောင်လွှားတဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်များကို ချေချွတ်ဖို့အတွက် ကောင်းကင်ယံထက်မှာ ယမိုက်ပြာဋိဟာ တန်ခိုးတော်ကို ပြတော်မူပါတယ်။ အဲဒီနောက် စိုစေလိုသူကိုသာ စိုစွတ်စေပြီး မစိုစေလိုသူတွေကို မစိုစွတ်စေတဲ့ ပေါက္ခရ၀ဿမိုးကြီး ရွာသွန်းတယ်လို့ ဗုဒ္ဓ၀င်များမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နိဂြောဓာရုံကျောင်းတော်ရာ(@ Kudan)
ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနက ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ နိဂြောဓာရုံဝင်းအတွင်းကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ ပေါက္ခရ၀ဿမိုး ရွာသွန်းဖြိုးစဉ်က ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ပေါက္ခရဏီ ကြာကန်ကို တွေ့ရပါတယ်။ ကြာကန်ရဲ့ အနောက်ဖက် ကပ်လျှက်မှာတော့ ပင်မကျောင်းဆောင် (အမှတ် ၁) ရှိပါတယ်။ ကျောင်းဆောင်ထက်ကို သံလှေကားကနေ တက်လို့ ရပါတယ်။ အပေါ်မှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ စိုက်ထူထားတဲ့ သီဝလိင်ကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကျောင်းရဲ့ မြောက်မှာ ရေတွင်း တတွင်းနဲ့ ကျောင်းဆောင် အမှတ် (၂) တို့ ရှိပါတယ်။ ရေကန်ရဲ့ တောင်ဖက်မှာ ရှိတဲ့ စေတီကုန်းမြင့်လေးကိုတော့ ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနက တူးဖော်ခြင်း မပြုရသေးပါဘူး။ ဒီကုန်းရဲ့ အထက်မှာ အစ္စလာန် အဆောက်အအုံတစ်ခု ဆောက်ထားတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေက ဒီစေတီကုန်းလေးဟာ သားတော်ရာဟုလာကို သာသနာ့အမွေ ပေးတဲ့အနေနဲ့ ရှင်သာမဏေပြုပေးတဲ့ နေရာ အထိမ်းအမှတ် စေတီလို့ ရှင်းပြပါတယ်။ “ရှင်သာမဏေအစ နိဂြောဓာရုံက” လို့ အဆို ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူ မိထွေးတော် ဂေါတမီ ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသမီးများက ဘိက္ခုနီအဖြစ် သာသနာဘောင် ၀င်ခွင့် ပြုဖို့ လျှောက်ထားခဲ့တာလည်း နိဂြောဓာရုံမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်ထားစဉ်ကတော့ ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး (ဘိက္ခုနီသာသနာကို ဝေသာလီပြည်မှာ စတင်ခွင့်ပြု ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်)။ အမျိုးသမီးတွေကို ပိုင်ဆိုင်စရာ ပစ္စည်းအဖြစ် သဘောထား ဆက်ဆံလေ့ရှိတဲ့ အိန္ဒိယ လူ့မှုအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ ယောက်ျားသားများနဲ့ တန်းတူ ရဟန်းခံခွင့်ကို တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ မိထွေးတော် ဂေါတမီကို ဗုဒ္ဓခေတ်ရဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတစ်ဦး အဖြစ် တင်စားနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ Posted by
သူတို့ရဲ့ စန္ဒယားဆရာ စီစဉ်ပေးတဲ့ note ကို ရေစင်က www.noteflight.com မှာ ရိုက်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Posted by
မင်္ဂလသုတ် အစရှိတဲ့ သုတ္တန်ဒေသနာ အတော်များများကို “အခါတစ်ပါးတွင် မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် အနာထပိဏ်သူဌေး၏ အရံဖြစ်သော ဇေတ၀န်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏ (ဧကံ သမယံ ဘ၀ဂါ သာဝတ္ထိယံ ၀ိဟရတိ ဇေတ၀နေ အနာထပိဏ္ဍိကဿ အာရာမေ)” ဆိုတဲ့ နိဒါန်းနဲ့ အစချီလေ့ရှိပါတယ်။ ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်မှာ ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ သုတ္တန်ဒေသနာတွေက အလွန်များပြားတဲ့အတွက် ဇေတ၀န်ဟာ အလွန်အရေးပါတဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနိက ဌာနတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ အထူးပြောစရာ မလိုလှပါဖူး။ ပသေနဒီကောသလမင်းရဲ့ သားတော် ဇေတမင်းသား ပိုင်ခဲ့တဲ့ ဥယျာဉ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဇေတ၀န် (ဇေတ၀န) လို့ အမည်ရပါတယ်။ အနာထပိဏ်သူဌေးက ဥယျာဉ်မြေကို ရွှေဒင်္ဂါးပြားချင်း အစွန်းချင်းထိစပ်အောင် အပြည့်ခင်းပြီး ဇေတမင်းသားထံက ၀ယ်ယူကာ ဘုရားရှင်ကို လှူဒါန်းခဲ့တာပါ။ အနာထပိဏ်သူဌေးရဲ့ သဒ္ဓါတရားကို အားကျပြီး ဇေတမင်းသားက မြေနေရာတကွက်ကို မရောင်းတော့ပဲ ကျောင်းမုခ်ဦး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းပြီး ကုသိုလ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အနာထပိဏ်သူဌေးက ဇေတ၀န်ဥယျာဉ်အတွင်းမှာ ကျောင်းဆောင်၊ တရားဟော ခန်းမဆောင်၊ စင်္ကြံလမ်း၊ အိမ်သာ၊ မီးဖိုဆောင်၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ဇရုံးအိမ် (ရေနွေးငွေ့နဲ့ ချွေးပေါင်းတဲ့ အခန်း) စတာတွေ ထည့်သွင်းပြီး ခမ်းခမ်းနားနား ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းဆောင်တွေကို မဆိုထားနဲ့ ကျောင်းတိုက်မုခ်ဦးကတောင် အလွန် ခမ်းနားကြီးကျယ်တယ်လို့ အဆိုရှိပါတယ်။ တခါက ဘုရားရှင်နဲ့ ၀ါဒပြိုင်မယ်ဆိုပြီး လာတဲ့ တိတ္ထိတစ်ဦးဟာ ကျောင်းတိုက်မုခ်ဦးရဲ့ ခမ်းနားမှုကို မြင်တာနဲ့ မ၀င်ရဲတော့ဘဲ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီး ထွက်ပြေးဖူးကြောင်း ပလာယိတဇာတ်မှာ ဖော်ပြဖူးပါတယ်။ အသောမင်းက ဇေတ၀န် ကျောင်းတိုက်မုခ်ဦးရဲ့ တဖက်တချက်မှာ အမြင့်ပေ-၇၀ လောက်ရှိတဲ့ ကျောက်တိုင် တတိုင်စီ စိုက်ထူထားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်ဖက် ကျောက်တိုင်ထိပ်မှာ ဓမ္မစကြာဘီး၊ ညာဖက် ကျောက်တိုင်ထိပ်မှာ နွားလားဥသဘရုပ်ထုတွေ ထုလုပ်ထားကြောင်း တရုတ်ရဟန်းတော် ဖာရှန်နဲ့ ရွှန်ကျန်တို့ရဲ့ မှတ်တမ်းတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျောင်းတိုက်မုခ်ဦးနေရာက ဒီနေ့ခေတ် သာဝတ္ထိ မြန်မာကျောင်းဟောင်းနေရာလောက်မှာ ရှိတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒီကျောက်တိုင် နှစ်ခုရဲ့ အခြေကို ကြိုးစား ရှာဖွေတူးဖော်ခဲ့ပေမယ့် မတွေ့ရတော့ပါဘူး။
ကျောင်းဆောင် အမှတ် (၁၁) နဲ့ (၁၂) ရဲ့ မြောက်ဖက်မှာ ရဟန္တာမထေရ်တွေရဲ့ ဓာတ်တော်စေတီ ၈-ဆူ ရှိပါတယ်။ လမ်းအတိုင်း ဆက်သွားရင် မြန်မာဆရာတော်တွေက ရှင်သီဝလိကျောင်းဆောင်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျောင်းဆောင် အမှတ် (၇) ကို ရောက်ပါတယ်။ ကျောင်းဆောင် အ၀င်ဝမှာ ကုလားဘုန်းကြီးတွေက စာရွတ်ပြီး အလှူခံနေကြပါတယ်။ ဘုရားခန်းဆောင် တခုပါဝင်ပြီး အုတ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ခပ်နိမ့်နိမ့် ပန်းတင်ခုံလေး ရှိပါတယ်။ ဘုရားဖူးတွေက အဲဒီပန်းတင်ခုံပေါ်မှာ အမွှေးတိုင် ဆီမီးတိုင်တွေ ထွန်းညှိ ပူဇော်ကြပါတယ်။ ဇေတ၀န်ဥယျာဉ်အတွင်းမှာ ကျောင်းဆောင်နေရာ အတော်များများရှိပေမယ့် ဂန္ဓကုဋိကျောင်း၊ အာနန္ဒာဗောဓိပင်နဲ့ ရှင်သီဝလိကျောင်းဆောင် နေရာသုံးခုလောက်မှာပဲ ဘုရားဖူးတွေ စည်စည်ကားကား ၀တ်ပြုဆုတောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ “လာဘ်လာဘပေါများရာမှာ ဧတဒဂ်ရတဲ့ ရှင်သီဝလိရဲ့ ကျောင်းတော်ရာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘုရားဖူးတွေက တခုပ်တရ ဆုတောင်းပူဇော်မှု ပြုကြတယ်” လို့ ယူဆနိုင်သလို၊ “သက်တော်ထင်ရှား မရှိတော့ပေမယ့် ရှင်သီဝလိမထေရ်ရဲ့ အမည်နာမနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ နေရာဌာနတွေကတောင် ပူဇော်သက္ကာရ အထူးကို ခံတော်မူရသေးတယ်” လို့လည်း တွေးယူနိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းဆောင် အမှတ် ၇ (ရှင်သီဝလိကျောင်းဆောင်)
ဒီနေရာမှာ စပ်လို့ တရုတ်ရဟန်းတော် ဖာရှန်ရဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်းမှာပါတဲ့ စန္ဒကူးရုပ်ပွားဆင်းတုတော် အကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင် ၀ါတွင်းသုံးလ တာဝတိံသာ နတ်ပြည် ကြွနေစဉ်မှာ ဘုရားရှင်ကို ဖူးမြင်လိုတဲ့ ဆန္ဒကြောင့် စန္ဒကူးသားနဲ့ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော် ထုလုပ်ပြီး မြတ်စွာဘုရား သီတင်းသုံးတော်မူလေ့ရှိတဲ့ နေရာမှာ သီတင်းသုံးစေပြီး ကိုးကွယ် ခဲ့ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ပြန်ကြွလာတဲ့အခါ ရုပ်ပွားတော်က နေရာကနေထပြီး ဘုရားရှင်ကို ခရီးဦးကြိုဆိုတယ်။ အဲဒီအခါမှာ မြတ်စွာဘုရားက “သင်၏ နေမြဲနေရာ၌သာ စံနေလော့။ ငါဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်သောအခါတွင် သင်သည် ပရိသတ်လေးပါးတို့အတွက် ငါ၏ ကိုယ်စားဖြစ်ပေလိမ်မည်” လို့ ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူပါတယ်။ ဒီဆင်းတုတော်ဟာ ပထမဆုံး ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ဖြစ်ပြီး နောင်လာနောင်သားတွေက ဒီဆင်းတုတော်ရဲ့ ပုံတူကို ကူးယူပြီး ထုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ရဟန်းတော် ဖာရှန်က မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂန္ဓကုဋိကျောင်းဆောင် မီးစွဲလောင်တဲ့အချိန်က ဒီရုပ်ပွားဆင်းတုတော်က မီးထဲပါမသွားဘဲ ထူးထူးဆန်းဆန်း အနီးနားက ကျောင်းဆောင်တခုမှာ ပြောင်းပြီးစံနေတာကို ပြန်တွေ့ရတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထေရ၀ါဒ ပါဠိ အဋ္ဌကထာ ကျမ်းစာတွေမှာတော့ ဘုရားရှင်လက်ထက်က ထုလုပ်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဒီစန္ဒကူးရုပ်ပွားဆင်းတုတော် အကြောင်းကို မတွေ့ရပါဖူး။ ထို့အတူ ရှေးဟောင်းသုတေသီတွေရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အသောကမင်း ခေတ်လောက်အထိ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ပုံတော်ကို ထုလုပ်ကိုးကွယ်ခြင်း မရှိခဲ့ကြဘဲ၊ ဇာတ်နိပါတ်ပုံတွေ ထုလုပ်ရာမှာတောင် ဘုရားရှင်ကိုယ်စား ဗောဓိပင်၊ ဓမ္မစကြာဘီးစတဲ့ သင်္ကေတတွေကိုပဲ အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဂန္ဓာရဒေသကို ဂရိဘုရင် အလက်ဇန်းဒါး (Alexander the Great) ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်းကာလမှာမှ ဂရိယဉ်ကျေးမှုတွေ ကူးလူးဝင်ရောက်လာပြီး မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကို ထုလုပ်တဲ့ အလေ့အထ ထွန်းကားလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ တရုတ်ရဟန်းတော် ဖာရှန် ဂန္ဓာကုဋိတိုက်ထဲမှာ ဖူးမြော်ခဲ့ရတဲ့ စန္ဒကူးရုပ်ဆင်းတုတော်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းက တဆင့်စကား ပါးစပ်ရာဇ၀င်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဂန္ဓကုဋိတိုက်ရဲ့ အရှေ့မြောက်ဖက်မှာ ကျောင်းဆောင်အမှတ် G နဲ့ F ရှိပါတယ်။ ကျောင်းဆောင်အမှတ် G က စတုဂံပုံရှိပြီး အလယ်တွင် ခန်းမကို ဘေးပတ်လည်က အခန်းပေါင်း ၂၆ ခန်း ၀န်းရံထားပါတယ်။ အလယ်ခန်းမထဲမှာ ၅-ပေခန့် မြင့်တဲ့ အုတ်ပလ္လင်ကြီး ရှိပါတယ်။ အုတ်ပလ္လင်ရဲ့ မျက်နှာစာနံရံကို ဘုရားဖူးတွေက ရွှေချထားပါတယ်။ အောက်ခြေမှာတော့ အမွေးတိုင်၊ဆီးမီပူဇော်ထားတဲ့အတွက် မှိုင်းစွဲနေပါတယ်။ ဒီအုတ်ပလ္လင်ကြီးပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကြီး တစ်ဆူ သီးတင်းသုံးခဲ့ဟန် ရှိပါတယ်။ အချို့ကလည်း ဒီနေရာဟာ ဘုရားရှင် လက်ထက်က တရားဟော ဓမ္မာရုံကျောင်းခန်းမလို့ ယူဆကြရပါတယ်။ ဒီဓမ္မာရုံကျောင်း ခန်းမနေရာမှာပဲ ဘုရားဖူးတွေ စုပေါင်းပြီး ၀တ်ပြုကြ၊ မင်္ဂလသုတ်စတဲ့ ပရိတ်တွေ ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီနောက် ဘုရားဖူးအဖွဲ့က လမ်းအတိုင်း တောင်ဖက်ကို ပြန်လှည့်ပြီး အာနန္ဒာဗောဓိပင်
ရှိရာကို သွားကြပါတယ်။ အာနန္ဒာဗောဓိပင် အကြောင်းကို ဇာတကအမှတ် ၄၇၉ ကာလိင်္ဂဗောဓိဇာတ် အဋ္ဌကထာမှာ တွေ့ရပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ဒေသစာရီ လှည့်လည်နေတဲ့အခါတွေမှာ ဘုရားဖူးလာတဲ့ မြို့သူမြို့သားတွေက အခြားပူဇော်စရာမရှိတဲ့အတွက် မိမိတို့ ယူဆောင်လာတဲ့ ပန်းနံ့သာတွေကို ဂန္ဓကုဋိ
တံခါးဝမှာသာ ချပြီးသွားရပါတယ်။ ဘုရားရှင် ဖူးမြော်စဉ်ကလို ၀မ်းမြောက်ပီတိ မဖြစ်ကြရပါဘူး။ အဲဒီအကြောင်းကို အရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်တဲ့အခါ သရီရစေတီ၊ ပရိဘောဂစေတီ၊ ဥဒိဿစေတီလို့ ခေါ်တဲ့ စေတီသုံးမျိုးအနက် ပရိဘောဂစေတီထိုက်တဲ့ (ဗုဒ္ဓဂယာက) မဟာဗောဓိပင်ရဲ့ မျိုးကို ယူပြီး ဇေတ၀န်ကျောင်း တံခါးဝအနီးမှာ စိုက်ဖို့အတွက် ဘုရားရှင်က ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဗောဓိမျိုးစေ့ကို ရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်က တန်ခိုးနဲ့ ယူဆောင်ပေးပြီး အနာထပိဏ်သူဌေးက စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။ အရှင်အာနန္ဒက တောင်းပန်တဲ့အတွက်ပဲ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဗောဓိပင်ရင်းမှာ တစ်ညတာ သမာပတ် ၀င်စားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ အရှင်အာနန္ဒာရဲ့ အစီအမံနဲ့ စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ အတွက် အာနန္ဒာဗောဓိလို့ အမည်တွင်ပါတယ်။ ဘုရားရှင် လက်ထက်ကတည်းက နယ်ကနေ ဘုရားဖူး ရောက်လာတဲ့ ရဟန်းတော်တို့က အာနန္ဒဗောဓိကို ပန်းတွေနဲ့ ပူဇော်လေ့ ရှိကြတယ်လို့ ဇာတကအမှတ်၂၆၁ ပဒုမဇာတ် အဋ္ဌကထာမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘုရားဖူးတွေက အာနန္ဒာဗောဓိပင်ကို လက်ယာရစ်ပတ်ပြီး ပူဇော်ကြပါတယ်။ အိမ်မှာ ကိုးကွယ်ဖို့အတွက် ကျနေတဲ့ ဗောဓိညောင်ရွက်တွေကို ကောက်ယူကြပါတယ်။ ဗောဓိညောင်ရွက်ကို ဥယျာဉ်စောင့် ကုလားတွေကလည်း ကောက်ပြီး ရောင်းနေပါတယ်။
ပိဋကသုံးပုံ - ပါဠိ၊ မြန်မာပြန်နှင့် အဋ္ဌကထာPTS Pali-English DictionaryAccess to Insightမြန်မာစာ မြန်မာစကားမြန်မာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း အဘိဓမ္မာ အသင်းကြီး
စာရေးသူသည် လောကကို ဝေဖန်သူ ဖြစ်ပြီးစာရေးသူကို သူရေးသောစာများက ဝေဖန်သည်။မသီတာ
BC English Course
A British Council website for lower primary students.http://www.learnenglish.org.uk/kids/BBC Learning Resource for home and schoolhttp://www.bbc.co.uk/schools/Vocabularyhttp://www.bbc.co.uk/hardspell/http://www.wordsurfing.co.uk/http://www.eslcafe.com/Grammarhttp://www.bbc.co.uk/skillswise/words/grammar/http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtmlhttp://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/http://owl.english.purdue.edu/handouts/index2.htmlhttp://a4esl.org/q/h/grammar.htmlhttp://www.ruthvilmi.net/hut/LangHelp/Grammar/http://www.ccc.commnet.edu/grammar/Listeninghttp://www.elllo.org/http://www.esl-lab.com/http://www.penguindossiers.com/audio-frameset.asp
Your aspirations are your possibilities. (Samual Johnson)The purpose of education is to replace an empty mind with an open one. (Malcom Forbes)Experience is what you get when you do not get what you want. (Anonymous)သမိုင်း မတွင်စေကာမူပုံပြင် အလား ဒဏ္ဍာရီလိုမပီပြင် ၀ိုးတ၀ါးပါစေကိုယ့်အပြစ်နှင့်ကိုယ်တသက်တကျွန်း ကျခံနေရသူ တစ်ယောက်လမ်းကြုံသလို လျှောက်လည်သူ့အတွက် ပြေးစရာ မြေရှိနေတာကျေးဇူးပါ Blog ကမ္ဘာကျွန်း=ဇမ္ဗူဒီပါ လက်ယာတောင်ကျွန်းရောက်ခဲ့ဖူးသော နေရာများ၊ မလည်ရ မနေနိုင်သော အိမ်များနဲ့ မရောက်ဖူးသေးသော နေရာများအတွက် CBox sonata-cantata
Copyright © http://sonata-cantata.blogspot.com/ဤဘလော့တွင် ဖော်ပြထားသော စာ၊ ရုပ်ပုံများအား ထပ်ဆင့်ဖော်ပြလိုပါက မူပိုင်ဖြစ်သော sonata-cantata အား c-box သို့မဟုတ် e-mail - sonata.cantata@gmail.com မှတဆင့် အသိပေး အကြောင်းကြားပြီးမှသာ ကူးယူဖော်ပြစေလိုပါသည်။ http://sonata-cantat.blogspot.com/ မူရင်း link ကို ဖော်ပြပေးစေလိုပါသည်။